IBallparker: Dala izilinganiso ngokulula | Martech Zone
The umkhakha wokunika amandla wokuthengisa iyaqhuma ekukhuleni, izinkampani eziningi ngokwengeziwe zibona ukuthi umsebenzi wokuthengisa ushintshe impela kule minyaka edlule. Ngesikhathi leli themba lifika kuwe, bacwaninge wena nabancintisana nabo ku-intanethi, baqonda amandla nobuthakathaka bakho futhi bamane bafuna ukufika esiphakamisweni.
Omunye umkhakha womkhakha wezobuchwepheshe bokuthengisa ukusiza amabhizinisi kalula ukwakha nokusabalalisa izilinganiso, izingcaphuno, iziphakamiso nezimpendulo kuma-RFPs (isicelo seziphakamiso). Kunenani elikhulayo lezixazululo laphaya, kusuka kuzixazululo zebhizinisi ledeskithophu ezihlangana neZwi, kuze kufike ezixazululweni zeziphakamiso ezinophawu ngamakhono we-esignature nengxoxo, kuze kufike ezixazululweni ezingasindi zokuthuthukisa izilinganiso.
Umsunguli uDavid Calvert usebenze embonini ye-ejensi iminyaka engaphezu kweyishumi futhi wabona igebe emakethe yeBallparker. IBallparker yipulatifomu enhle ehlanzekile, eyenzelwe ngokukhethekile ukwenza inqubo yokuqagela imisebenzi engaba khona ngokushesha nangokulula. Lokhu kutholakala ngokwenza ipulatifomu ifanele wonke amadivayisi weselula namakhompyutha wedeskithophu. Ipulatifomu ihlala itholakala nge- ifu, ukuvumela noma yimuphi umuntu onikwe umsebenzi wokudala izilinganiso ukuthi akwenze ngenkathi esesizeni, kude nehhovisi noma emuva etafuleni labo.
Uma isilinganiso sesikhiqiziwe singathunyelwa nge-imeyili ngaso leso sikhathi sisuka kuselula noma sishiye kuze kube yilapho umuntu esebuyele ehhovisi. IBallparker ibuye ibe nethuluzi lokubika elingenza ukuqhathanisa nezinye izinkampani ezisemikhakheni noma ezindaweni ezifanayo, ngakho-ke abasebenzisi bayabona ukuthi basebenza kahle kanjani ngokuqhathanisa nezinye izinkampani ezifanayo nazo ezisebenzisa lolu hlelo.
Tags: I-ballparkerudavid calvertisilinganiso softwareisoftware yokuphakamisasoftware lesishokucashunwe